Accueil > Gazetin'ny nosy > Fotodrafitrasa manara-penitra : Tsara ivelany toy ny fasam-bao
Fotodrafitrasa manara-penitra : Tsara ivelany toy ny fasam-bao
Isan’ny tarigetran’ny filohampirenena Andry Rajoelina ny fananganana fotodrafitrasa mba holovain’ny taranaka mandimby. Ankoatry ny ho fandovan’ny taranaka azy anefa dia ny velona ankehitriny koa te hisitraka ny vokatsoan’izy ireny. Iray amin’izay hevitra maharesy lahatra ny fitondrana amin’ny fananganana azy ireny, ohatra, ny hoe “famoronana asa” mandritra ny fananganana azy sy aorian’ny fijoroany.
Misy tranga tsy azo ikimpiana anefa satria isan’ny mahasarotiny anay ny famitahana ny vahoaka. Tafiditra ao anatin’ny vahoaka voafitaka ny filohampirenena. Izaahay rahateo efa nilaza fa “sady tsy hijery arina an-tava no tsy hanolo-bato mafana ny fitondrana”.
Volan’imaso àry izy ity, ka tsy mba kilema. Vantanina ny resaka fa misy amin’ireo fotodrafitrasa nambara fa “manara-penitra” nataon’ny fitondrana no “madio ivelany toy ny fasam-bao”. Ny mahatonga anay hanamarika izany dia misy amin’ireny fotodrafitrasa ireny no zara fa vita fa ny endriny ivelany, satria tsara loko, dia mampodimandry, mambabo ny saina sy ny fo.
Efa nanaovanay fanamarihana teto, ohatra, momba izay tsy mampanara-penitra azy izay ny Hopitaly etsy Andohatapenaka. Raha miditra ao ianao dia mikoro ny valin-tafo, ny miempaka lafin-drindrina sasany, ary ny fanambaniny izay bakoly (carreaux) dia maro no miendaka. Raha tena manara-penitra izy dia tokony hisy fiantohana aloha. Izany hoe mandritra ny fe-potoana voafaritra dia tsy maintsy manarina ny tsy mety ny vondrom-barotra (entreprise) ary tokony misy avy eo ny fikojakojana maharitra. Tsy vokatry ny tsy fitandreman’ny mpanjifa koa. Misy koa ny sekoly (Sff=Epp) nambara fa manara-penitra no mitriatra ny rindrina nefa vao ambolana vitsy no notokanaa. Ny Fonja manara-penitra vao notokanaa eny Imerintsiatosika koa dia tena tsy mamaly ny fenitra voafaritra, ary tsy tokony hahafahana mampiditra olona hofonjaina akory. Misy tetezana koa voa sahady.
Ny mpiantoka ny asa aloha dia tokony itataovan-tsazy amin’izany. Ny mpanara-maso koa dia tsy ho afa-bela. Ny vahoaka sy ny filohampirenena moa dia voafitaka ary zary lanilany fotsiny ny volam-bahoaka. Hadihadio ange!
Mama sôsy : Lasa mpiahy an’Alaotra Mangoro
Fisondrota-karama 30 000ar : Voafitaka ny sehatra tsy miankina
Paika ady famoronana asa